Resipeo salady atody tsara indrindra - Fomba Fanamboarana
ny fomba fahandro ny paty atody maina
firy ny kapoaka vary maina ho masaka
Resipeo salady atody tsara indrindra
ny Resipeo salady atody tsara indrindra mora be! Tsy misy lafatra kokoa ny fitsangantsanganana atody nandrahoina mafy afangaro amin'ny mayo sy voan-tsinapy ary mazava ho azy mofomamy amin'ny tongolo seleria sy tongolo maintso!
Na manao sandwich salady atody ianao na salady atody salama amin'ny alàlan'ny salady na fonosana karbaona ambany dia tsy misy na inona na inona milaza hoe 'amerikana rehetra' toa ny salady atody!
Hafiriana ny mahandro atody ho an'ny salady atody
Ampiasaiko ity fomba ity atody nandrahoina mafy isak'izao mihetsika izao. Nivoaka niaraka tamin'ny fotsy fotsy masaka sy boribory mavo malefaka (tsy misy peratra volondavenona) izy ireo.
Entiko mangotraka izy ireo ary esorina amin'ny hafanana ary avelao hipetraka mandritra ny 15-17 minitra (atody lehibe). Mihazakazaha ao anaty rano mangatsiaka ary manopy iray mba hahazoana antoka fa tonga lafatra izy.
Fomba fanaovana salady atody
Vaovao ve ny atodinao? Ny fomba fahandro salady atody tsara indrindra dia atomboka amin'ny akora tsara. Ny atody vaovao dia mahandro tsara kokoa ary mamiratra kokoa. Atody vaovao no hipetraka amin'ny sisiny eo am-pototry ny rano lovia, raha somary antitra izy ireo dia mbola hilentika ihany, fa hijanona amin'ny lafiny iray. Aza mihinana atody raha mitsingevana eny ambonin'ny rano, midika izany fa lany daty izy ireo.
Aza hadino ny manaparitaka tsara ny tongolo sy seleria mba ho kely kokoa noho ny atody!
Manamboatra Sandwich Salady atody
Afetaho amin'ny mayonnaise ny kininina mandra-pahazavany tanteraka ary aforeto amin'ny fotsy. Izany dia mahatonga ny salady atody tsara indrindra, mivoaka mamy tokoa!
Mampiasa an mpamafa atody tetehina ny fotsy mametraka ny fotsy ao anaty lozika, tapaho ary avy eo avadiho ilay atody ary apetrakao indray. Ataovy haingana dia haingana ny fanapahana! Mampiasà ny atody ho an'ny zavatra hafa koa aho toa ny frezy, kiwi ary tsara indrindra ny manapaka holatra hatao marsala akoho .
Ny Lunch Lavorary
Andrahoy, mangatsiatsiaka ary esory ny atody. Sasao roa, esory ny yolk sy ny fotsy fotsy.
Afetaho amin'ny masony, voantsinapy sy sira ary dipoavatra ny atody atody.
Ampio ny atody fotsy voatetika sy ny tongolo maintso, seleria, ny aneta vaovao efa voatetika. Afangaroy tsara ary aroso mangatsiaka amin'ny mofo, salady, na fonosana!
Mba hahazoana maka vaovao dia manandrama manamboatra salady atody avokado miaraka amin'ny avokado voatoto! Tena salama tsara amin'ny kilasika amerikana!
Maharitra hafiriana ny salady atody?
Midika izany raha misy ambiny? Mora ny milaza azy rehefa vonona ny hatsipy ny salady atody. Ho feno rano izy ary ho very ny loko mamirapiratra! Fa ny tena mety dia tsy haharitra ela ao an-tranonao ity recette salady atody ity!
Salady Mora kokoa
Salady Shrimp - tsara amin'ny croissant
Ny fomba fahandro salady ovy tsara indrindra (Mora) - tena matsiro
Salady akoho tsara indrindra - ny sandwich tsara indrindra!
Salady Ham - Tsara ho an'ny ambiny!
Saldor Waldorf - Vaovao sy mangatsiaka!
Saladin'ny Tuna mahazatra - Fomba fahandro mora mihoatra ny salady na amin'ny mofo!
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo10 minitra Fotoana manontoloroa-polo amby minitra Fanompoana4 servings MpanoratraHolly Nilsson Tsy misy tonga lafatra kokoa ny fitsangantsanganana noho ny fomba fahandro salady atody mamy! pirinty Pin
▢8 atody nandrahoina mafy ary nangatsiaka
▢1 ½ sotrokely voantsinapy mavo
▢1 tongolo maintso notetehina manify
▢1 voasarimakirana diced tsara
▢rOA sotrokely aneta vaovao voatetika
Hetezo roa ny atody. Esory ny yolky sy ny fotsy fotsy.
Voangory miaraka amin'ny mayonnaise, voantsinapy sy sira ary dipoavatra mba hanandrana mandra-malama sy malefaka azy.
Ampio akora sisa tavela ary afangaro tsara.
Aroso amin'ny mofo na amin'ny salady.
Kaloria:320,Karbohidraty:1h,Proteinina:iraika ambin'ny foloh,Tavy:29h,Tavy voky:6h,Cholesterol:339levitra,Sodium:332levitra,Potasioma:147levitra,Sugar:1h,Vitamina A:570IU,Vitamina C:0.9levitra,Kalsioma:53levitra,Vy:1.6levitra
Teny lakilesalady atody Mazava ho azySakafo atoandro, Salady masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno ity Recipe Easy ity